အုတ်ဆေးသုတ် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
ဘယ်အချိန်မှာဒါဟာယဉ်ကျေးမှုအမှကြွလာ အုတ်ဆေးသုတ် မြို့ရိုးသည်ကထိုကဲ့သို့သောစက်မှုဇုန်လေတိုက်နှုန်းသို့မဟုတ်အစောပိုင်းကအဖြစ်စပျစ်သီးကိုအုတ်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ပိုပြီး texture အပြောင်းအလဲများနှင့် themes များနှင့်အတူတစ်ဦးကအုတ်မြို့ရိုးကိုအာရုံစိုက်ဖန်တီးနေတဲ့ဖြတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အုတ်ရိုးကိုအောင်ဘယ်လိုကြောင့်? ရိုးသားခြင်းနှင့်ရိုးရိုးသားသားအနီရောင်အုတ်မြို့ရိုးကိုတညျဆောကျ, အလငျးယဉ်ကျေးမှုကျောက်တစ်ဝက်စစ်မှန်တဲ့တဝက်အတုစတစ်ကာများ မှစ. ဤနှစ်နှစ်ပင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမှန်ကန်အုတ်ဝေါလ်ပေ၏ရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါတယ်။
အနုပညာဗိသုကာအလှဆင်အတွက်အလွန်ဘုံအနုပညာပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရှေးခေတ်ကကတည်းကလူကြိုက်များခဲ့, ထိုသို့အချိန်ကြာမြင့်စွာမြင်ကြဖူး။ ဒါဟာနက်ရှိုင်းစွာအသက်တာ၌စားသုံးသူချစ်မြတ်နိုးသည်။ ယဉ်ကျေးမှု
အနုပညာပုံသဏ္ဍာန်ဒဏ်ငွေပစ္စည်းများ လုပ်. လက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောအသွင်သဏ္ဌာန်အနုပညာအသိနှင့်ပြည့်ဝ၏, နှင့်အလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကအလွန်ခိုင်မာတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောအဆင်းအရောင်နှင့်ထိုသို့သောတီဗီနောက်ခံနံရံဧည့်ခန်း, ထမင်းစားခန်းအဖြစ်ဒေသခံအလှဆင်ဘို့အထူးသဖြင့်သင့်လျော်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ, ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။ စောင့်ပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အာကာသထူးခြားတဲ့နှင့်ထူးခြားသောစေသည်။
ပုံစံ - 4-2
အဆင်းလှသောနှင့်လူကြိုက်များယဉ်ကျေးမှုအုတ်မြို့ရိုးကိုတဦးတည်းအားဖြင့်အနီရောင်အုတ်တဦးတည်းကတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည် Want?ဘယ်ဟုတ်မလဲ!ChengLin ၏ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများကိုမှတဆင့်,ယဉ်ကျေးမှုအုတ်အနုပညာတစ် retro အုတ်မြို့ရိုးကိုတညျဆောကျရန်လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲဖန်တီးနိုင်ပါတယ်;ထိုကဲ့သို့သောထူးခြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအုတ်မြို့ရိုးကိုလည်းကွဲပြားခြားနားသောသုတ်ဆေးနှင့်နည်းစနစ်များကိုပေါင်းစပ်မှတဆင့်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်.အဆိုပါထူးခြားတဲ့ texture ပုံစံကိုသင်ထူးခြားတဲ့သော Landscaping ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးပေး.
သင် retro အုတ်မြို့ရိုးကိုမကြိုက်ပါလျှင်သိပ်ကြမ်းတမ်းဖြစ်ပါသည်,အရိုးစုအလင်းရောင်နှင့်အတူတခုစက်မှုဇုန်စတိုင်အလှဆင်စတိုင်ဖန်တီးချင်,ရှင်းလင်းသောပိုက်,ရေမှိုအရောင်သို့မဟုတ်ဖန်တီးချင်,retro ဖက်ရှင်စတိုင်,Cheng လင်းဆန်းသစ်ဂျပန်မူပိုင်ခွင့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူဒါဟာအစယဉ်ကျေးမှုအအုတ်အနုပညာသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်,ဗေဒဦးစားပေး၏အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများထက်ပို.